Murtida Maanta [Thought of the Day] – Idil News
Bisha Ramadaan waa bisha Quraanku soo degey; isagoo dadka hanuun u ah, hanuun ku garab siiya kala saaridda xaqa iyo baaddilka. Waa in soomid uu billaabaa kiinna ogaada dhalashada bisha Ramadaan. Kuwiinna buka ama socdaal ku jira waa in maalmaha ka taga xilli kale gudaan. Eebbe kallif iyo culays idin dulsaari maayo. In si dhib yar aad soonka u gudataan ayuu idinla doonayaa, oo Eebbe ku muuneeysaan hanuunka uu idin siiyey, dabadeedna aad Isaga u mahadcelin doontaan.
Quraanka Kariimka 2:185 Suuradda al-Baqara